Kutheni ndingasakwazi ukuvula i-fixed DBF ifayile? - DataNumen
Kukho amathuba amathathu kule meko, ngolu hlobo lulandelayo:
akho DBF ifayile yenziwa sisicelo esinye, kodwa ufuna ukuvula ifayile esisigxina kolunye usetyenziso, olungahambelaniyo kwaphela noludala kwaye lubangele iingxaki. Isisombululo kukuseta uguqulelo oluchanekileyo kwibhokisi yokudibanisa ecaleni kwe "Khetha DBF ukuba ilungiswe ”ibhokisi yokuhlela ngokwesicelo sesibini emva koko starUkulungisa ifayile kwakhona. Umzekelo, eyakho DBF ifayile yenziwe nguClipper kodwa ufuna ukuyivula kwi-dBase III, emva koko kuya kufuneka usete "uguqulelo" kwi "dBase III" emva koko uphinde ulungise ifayile.
Ulungiso lwakho DBF Ifayile inkulu kune-2GB, umda wobungakanani owaziwayo we DBF iifayile, ke most DBF Izicelo ezihambelanayo azinakuvula ifayile yakho. Umzekelo, xa usebenzisa i-Visual FoxPro ukuvula ifayile enjalo, uya kufumana impazamo ethi "Hayi itafile". Isisombululo kukuvumela "ukwahlula ifayile xa inkulu kune # # # MB" kukhetho kwi "Khetha" isithuba kwaye usete ixabiso elifanelekileyo, elinokuba ngaphantsi kwe-2GB, umzekelo, i-1800MB, njengobungakanani obukhulu befayile, kunye emva koko lungisa eyakho yoqobo DBF fayile kwakhona. Xa iziphumo ifayile esisigxina inkulu kunalo mda, DDBFR iyakwenza ifayile entsha yokwahlulahlula ukulungiselela idatha esele ibuyisiwe. Kwaye ukuba ifayile yokwahlula ifikelela kumda kwakhona, ifayile yesibini eyahluliweyo iya kwenziwa, njalo njalo.
Kwimeko yakho echanekileyo DBF ifayile, kukho ngaphezulu kwama-255 amasimi etafileni. Okwangoku most DBF Izicelo ezihambelanayo azixhasi itafile eneendawo ezingaphezulu kwama-255. Umzekelo, xa usebenzisa i-Visual FoxPro ukuvula ifayile enjalo, uya kufumana impazamo ethi "Hayi itafile". Isisombululo kukuvumela ukuba "Yahlule itafile xa kukho ngaphezulu kwe # # # amasimi" ukhetho kwi "Khetha" isithuba kwaye usete ixabiso elifanelekileyo, umzekelo, 255, njengobuninzi bokubala kwenkundla, kwaye ulungise eyakho yoqobo DBF fayile kwakhona. Yiloo nto xa uDDBFR ifumanisa ukuba kukho ngaphezulu kwama-255 amasimi etafileni, iya kwenza itafile entsha yokwahlulahlula amasimi aseleyo. Kwaye ukuba amasimi aseleyo asengaphezulu kwamasimi angama-255, kuya kwenziwa enye itafile entsha yokwahlulahlula, njalo njalo.
ayinakuvula, ifayile esisigxina